Ilay Nepaley Mpiaro Tigra Rotiky ny Tigra Ny Masony Ilany Ary Nahazo Ny Solomason’i DiCaprio · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2015 8:19 GMT
Maherifon'ny tontolo iainana Bhadai Tharu manao ny solomaso nampahafantarin'ilay mpilalao sarimihetsika Hollywood, Leonardo Di Caprio. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'ny fiarahamonina Tharu.
Malaza amin'ny tigra Bengal ny valan-javaboaharim-pirenena Bardia, valan-javaboahary midadasika indrindra ao amin'ny lemaka atsimo ao Nepal. Ny lalantsara Khata, izay manome lalana malalaka ho an'ireo bibidia avy ao India mankao Nepal sy mifamadika amin'izany no mampifandray ny vala amin'ny Toeram-pitehirizam-biby Katerniaghat ao atsimo-atsinanana ao India.
Mitàna andraikitra lehibe amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny lalantsara Ny Vaomieram-pandrindrana ny Alan'ny fiarahamonina Khata. Iray amin'ireo mpikambana mavitrika ao amin'ny komity i Bhadai Tharu, lehilahy nanolo-tena tanteraka hiaro ny tigra, ka na efa notafihan'ny tigra aza izy, tsy nanakana azy hanohy ny andraikiny manokana izany.
Bhadai Tharu, ilay Lehilahy Tigra…Izay efa niady tamin'ny tigra iray ary miady ho an'ny tigra ankehitriny… Maherifo noderain'i @LeoDiCaprio
Rovitry ny tigra ny masony iray raha tao anatin'ny valan-javaboary izy nandritra ny kharkhadai tamin'ny 2004, fe-potoana maharitra telo andro rehefa omen'ny manampahefana alalana hiditra ao amin'ny vala ny mponina ao an-toerana mba hanapaka bozaka ho ampiasana mandritra ny taona. Mampiasa bozaka vao notapahana ny olona mba hanovana ny tafo bozak'izy ireo isan-taona, ary manao fefy koa hisorohana ireo biby tsy hiditra ao amin'ny sahan'izy ireo.
Mba handrakofana ny holatra goavana tamin'ny loza mampalahelo, manao solomaso miaro amin'ny masoandro foana izy. Saingy tsy solomaso taloha fotsiny izany: fa natolotr’ ilay mpilalao sarimihetsika Amerikana Leonardo DiCaprio.
Maherifon'ny fiarovana, Bhadai Tharu manao ny solomaso fanomezana avy amin'ilay mpilalao ny horonatsary Titanic, Leonardo DiCaprio
Raha nitsidika an'i Nepal tamin'ny volana Mey 2010 i DiCarpio, nanolotra ny solomasony miaro amin'ny masoandro nanaovany ho an'i Tharu izy rehefa nahita ny fahavononan'ity lehilahy ity amin'ny fiarovana ny tigra. Niaraka nandany fotoana maharitraritra izy mirahalahy avy eo.
“Manan-jo tanteraka ny bibidia ao anaty ala” Fantaro i Bhadai Tharu, iray amin'ireo olona maro manampy amin'ny fiarovana ny tigra.
Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny gazetiboky Dreams, hoy i Tharu:
“Niresaka momba ny lasako izahay, ary avy eo nilaza tamiko izy fa efa nahare zavatra betsaka momba ahy ary nahita ny sariko. Iray amin'ireo fotoana mahafinaritra ahy indrindra teo amin'ny fiainako izany, satria nankatoaviko ho toy ny mahery fo tamin'ny Titanic izy, ilay niaraka tamin'ilay vehivavy tao anaty sambo
Nahazo ny Lokan'ny Fiarovan-javaboary Abraham tamin'ny taona 2004 i Tharu, izay efa mpiasa tany tsy manan-tany ary lasa mahery fon'ny fiarovana ho fankasitrahana ny fandraisany anjara amin'ny fiarovana [ny tontolo iainana]. Eto no ahitantsika manao hira miresaka amin'ny teny Nepaley:
Tamin'ny lahatsoratra Facebook, voasoratra ao amin'ny Fiarahamonina Tharu, pejy Facebook-n'ny fiarahamonina indizeny Tharus (amin'ny teny Nepaley) hoe:
“Tonga ao Nepal ny tigran'i India,
Latsam-pitiavana amin'ny tigra ao Nepal.
Aza ravàna ny fifankatiavan'izy ireo,
Asa simbaina ny lalantsaran'ny biby mpirenireny.”
Raha efa mpiasa an-tery nandritra ny 11 taona, dia mihira ity hira ity i Bhadai Tharus ao Suryapatuwa-4, Bardia tao ho ao. […]
[…] “Tamin'ny voalohany aho nahatsapa toa mikaroka sy mamono ilay tigra nanafika ahy, saingy avy eo, nihevitra aho fa mety nanafika ahy mba hamonjy ny tenany amin'ny loza mitatao izy,” hoy i Bhadai. “Izany no mahatonga ahy mirotsaka amin'ny fiarovana ny toeram-piriariavana sy fonenan'ny tigra.”